Fitaovana fidirana amin'ny tranonkala
Samy hafa amin'ny asa fandikan-teny ny tenanay. Ny votoatin'ny tranonkala dia azo adika. Nefa ny tranonkala tranokala dia amin'ny teny anglisy izay tsy azo ovaina amin'ny fiteny hafa. Ny fitaovan'ny fiteninay dia manome vahaolana manerantany ho an'ity.
Ny URL-n'ny tranonkala dia amin'ny teny Anglisy.
Noho izany, tsy afaka manokatra tranokalan'ny tranonkala ny olona tsy miteny anglisy, ambanivohitra ary ny faritra. Ny fitaovan'ny fiteninay no tena fitaovana ho azy ireo. 1. Ny mpizara amin'ny teny avy any an-toerana dia mahazo pejy amin'ny alàlan'ny fanampian'ny olona iray indray mandeha
2. Aorian'izany dia afaka manokatra tranokala miaraka amin'ny fitaovana ataontsika izy ireo, amin'ny tanany ihany
3. Hiditra ao amin'ny adiresy baiko ppooii Ctrl + Enter ny tranokala dia hisokatra na ooiiuu.com sns. (Ny 3 rehetra, havia havia, indroa, izay miaraka amin'ny keyboard).
4. Ny Governemanta sy ny tompona tranokala dia tsy maintsy mametraka ny fehezan-dalàna ao amin'ny vohikalany manokana
Ny fitaovan'ny fiteninay dia miasa toy ny tranonkala.
1. Mamakia sy mametaka code ao amin'ny --body-- tag ao amin'ny tranonkalanao ary miandrasa.
2. Sokafy ny tranokalanao manokana ao amin'ny tranonkalanao mandritra ny fotoana fohy aorian 'ny famenoana ity code ity
3. Soraty ao amin'ny tranokala ppooii.com na (ooiiuu sy Ctrl + Enter) sns. Jereo ny sary hosodoko
Ny fitaovan'ny fiteninay dia miasa ho an'ny olona.
1. Soraty ao amin'ny tranokala ppooii.com na (ooiiuu sy Ctrl + Enter) sns. Jereo ny sary hosodoko
2. Ireo fanalahidy 3, miankavia, indroa, izay miaraka amina klavier